TORITENY Alahady 17 Septambra 2017 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 17 Septambra 2017
“Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Tim 1 : 7 – 8
I samoela 17 : 37 – 51 / Marka 15 : 39 – 41 / Galatiana 2 : 11 – 21
Raha nantsoina hifanandrina tamin’ny miaramilan’ny Filistina ny miaramilan’ny Zanak’Israely dia tsy nisy sahy, Davida mpanjaka, lehilahy mbola ao anatin’ny fahatanorana, mpiandry ondry tsy miaramila tsy akory, no sahy nanatona ny fahavalony izay tena goavana noho izy, Goliata no anarany. Nandresy Davida,
Inona no tsiambaratelon’ny fandresena ?
Ny I Samoela 17 : 37-51 no hitarika antsika hahatakatra izay fiainam-pandresena tokony hotahafintsika .
I – Manana fahasahiana ny olona miantehatra amin’Andriamanitra
Goliata, lehilahy matanjaka, ary fomba amin’ny fitaovam-piadiana rehetra ka mihantsy ady amin’olona mandrakariva satria tsy mbola nisy naharesy azy hono. Davida mpiandry ondry nasaina nanatitra sakafon’ny miaramilan’ny Israely no vonona ka sahy hifanandrina aminy. Natolotra azy ny fitafiam-piadiana rehetra saingy tsy nahazatra azy ka dia nesoriny. Sahy Davida miatrika ny fahavalo goavana noho izy, satria tena fantany ary maharesy lahatra azy fa tsy amin’ny herin’ny tena no ahazoana fandresena fa ny fiankinana amin’Andriamanitra.
Lesona : Manoloana ireo Goliata be dia be eo amin’ny fiananao, (olana goavana , aretina , fahoriana , fakam-panahy , toetra ratsy , tsy fisiana …) mihantsy ady aminao , efa mba sahy nifanandrina ve ianao ? Inona no fitaovam-piadiana noraisinao, ary amin’ny fomba ahoana no nandresenao azy ireo ? Sa resy tsy miady ka nanjary lasa andevony ?
II – Mahazo fandresena ny olona miantehatra amin’Andrimanitra
Sabatra sy lefona, fitafiana vy tsy laitran’izany no fiarovan-tena sy fiadiana nentin’I Goliata, fa vaton’antsamotady kosa no nandresen’I Davida Azy. Dia ho azo eritreretina ve ny fahamarinan’izany hoy ianao ? Eny satria, Goliata manatona an’ Davida amin’ny sabatra sy ny lefom-pohy fa Davida kosa manatona azy amin’ny anaran’Andriamanitry ny Israely. Cf I Samoela 17 and 45. Vokany, nikarapoka tamin’ny tany Goliata ary vaky nandositra ny miaramilan’ny Filistina.
Lesona : Manoloana ny adim-panahy sy ny adim-piainana, ny fiankinana sy ny fahatokiana an’Andriamanitra tokana no antoka ahazoana fandresena izay tsy ho an’ny tena ihany fa mampahery ny hafa koa, jereo fa nanjary sahy nanenjika ny miaramilan’ny Fiilistina ny miaramilan’ny Israely raha vao nahita fa lavon’I Davida i Goliata.
Fehiny : Ny zava-tsarotra sy manahirana rehetra eo amin’ny fiananao dia efa nentin’I Jesoa Kristy teo ambony hazo fijaliana ary efa resiny izany tamin’y fitsanganany tamin’ny maty. Ry Kristiana havako, aza mifidifidy hazo fijaliana, fa Jesoa Kristy efa miaraka aminao, mampandresy anao Izy na toy inona na toy inona herin’ny Goliata mitady hanapotika ny fiananao. Ny safidinao hiaraka amin’Andriamanitra dia sady mampandresy anao no fijorona vavolombelon’ny Tompo ka mitaona ny hafa hanaiky an’I Jesoa ka hanankina ny fianany Aminy ihany koa .
Mpianatra Mpitandrina Kolejy Teolojika Ivato
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 23 septembre 2017